iTunes Match VS Google Play Music (I): Ampidiro ny mozika | Vaovao IPhone
Rehefa afaka herinandro maro niandrasana dia efa maimaim-poana izao ny Google Play Music. Ny serivisy fitehirizana mozika rahona an'ny Google dia tsy azo ihodivirana raha oharina amin'ny iTunes Match, natolotry Apple. Ireo serivisy roa ireo dia manolotra zavatra iray mitovy, na dia maimaim-poana aza ny Google, miaraka amin'ny serivisy Premium (€ 9,99 / volana) ary ny adidin'i Apple dia manosika anao hamaky ilay boaty (€ 24,99 / taona). Inona no atolotry ny serivisy roa? Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'izy roa? ¿Manonitra handoavana ny iTunes Match rehefa manolotra "mitovy" i Google Play Music? Andao hojerentsika ireo serivisy roa ireo amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo tena mampiavaka azy ireo. Androany isika dia hiresaka momba ny tena asany: mitahiry mozika ao anaty rahona.
1 Google Play Music: hatramin'ny 20.000 ny hira maimaim-poana
2 iTunes Match: fonosana tokana amin'ny vidin'ny € 24,99 isan-taona
3 Serivisy roa misy valiny mitovy amin'izany
Google Play Music: hatramin'ny 20.000 ny hira maimaim-poana
Google dia manolotra ny serivisiny fitehirizana mozika rahona mizara roa: maimaim-poana ny fitehirizana, hira hatramin'ny 20.000 izay azonao apetraka amin'ny rahona mora foana, tsy misy fetra habe, fa ho an'ny serivisy radio dia tsy maintsy mandoa ianao. Ny mozika izay ividiananao mivantana avy amin'ny Google Play dia tsy manisa ny fetrany ary ireo izay tsy hitan'i Google ao amin'ny katalaoginy be dia be no ampakarina. Google dia nanamora izany ho an'ny mpampiasa Apple, satria afaka manafatra mivantana ny tranomboky mozikao avy any iTunes ianao, misintona rindrambaiko tsotra izay tsy manisy afa-tsy izany: mampakatra sy misintona mozika avy amin'ny Google Play Music. Tsy manana mpilalao izany, mampalahelo, na dia ny browser ampiasainao aza dia ahafahanao mitendry ny mozika rehetra mivantana.
iTunes Match: fonosana tokana amin'ny vidin'ny € 24,99 isan-taona
Apple amin'ny lafiny iray dia manolotra fonosana tokana amin'ny € 24,99 isan-taona. Raiso na avelao, tsy misy safidy eo anelanelany. Raha mandoa izany ianao dia hanana ny fitehirizana ao anatin'ireo hira sivy hatramin'ny 25.000, nefa tsy manisa ireo novidinao mivantana avy amin'ny magazay iTunes, sy ny serivisy amin'ny onjam-peo tsy misy dokambarotra ary afaka mandefa hira tsy misy fetra (mbola tsy misy any Espana ). Toy ny teo aloha, ireo hira izay tsy hitan'i Apple ao amin'ny katalaoginy be dia be ihany no halefa ao amin'ireo mpizara azy, ireo izay fantany dia tsy mila ampakarina, hiseho mivantana ao amin'ny tranombokinao izy ireo. Ho fanampin'izay, ireo izay fantatrao fa hanananao Endrika AAC, tsy misy DRM sy kalitao 256Kbps, na inona na inona hatsaran'ny fisie orizinalinao. Ny fandefasana ny mozika sy ny fitendrena azy dia vita amin'ny fampiharana iTunes mihitsy, izay mety ho tombony na fatiantoka, miankina amin'ny tsironao. Izaho manokana dia aleoko manao an'izany, tsy tiako ny mampiasa tranokala hijerena mozika.
Serivisy roa misy valiny mitovy amin'izany
Raha vantany vao nakarina tao amin'ny Google Play Music na iTunes Match ny fitehirizam-bokinao, dia nitovy ny valiny. Ny serivisy roa dia namela ahy hira vitsivitsy nefa tsy namantatra tsara, na dia teo aza ny fisian'izy ireo nasiana marika tanteraka. Mahaliana ny tsy nampifanarahan'izy ireo ireo hira tsy fantatra. Ny fotoana nampakarako ny tranombokiko, miaraka amina hira mihoatra ny 1000 dia nitovy tamin'ny tranga roa, angamba somary miadana kokoa ny Google Play Music, fa tsy dia misy dikany.
Mbola mila mandinika ny serivisy an'ny fampiharana amin'ny radio sy finday mandefa streaming azo henoina ny mozikantsika, fa izany dia hivoaka amin'ny lahatsoratra vaovao roa hafa amin'ny andro ho avy.
Fampahalalana bebe kokoa - Tonga ao amin'ny AppStore ny Google Play Music
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iTunes » iTunes Match VS Google Play Music (I): Ampidino ny mozikao
Apple dia hanao ny "Zoma Mainty" amin'ity 29 Novambra ity